Fiidiyowyo dheeri ah oo loogu talagalay 3D madani ah, Khariidadda AutoCAD iyo Revit - Geofumadas
Fiidiyo badan oo loogu talagalay madaniga 3D, Khariidada AutoCAD iyo Dib u celinta
Juunyo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Engineering, topografia
... ee ugu fiican, ka dib markii AUGI MexCA tagtay dayactirka ...
Waqtigaan ka hor waxaan dib u eegay AUGI cutubkeeda kulaylaha, iyadoo leh qadar qiimo leh oo loogu talagalay dadka isticmaala teknooloojiyada AutoCAD Civil3D iyo Khariidada. Nasiib darrose, boggu wuxuu galay dayactir in kabadan hal sano ka hor, cusbooneysiin aan sugeynay oo hubaal wuxuu imaan doonaa dhowr bilood.
Si aan u buuxiyo farqigaas waxaan ku sameynayaa dib u eegis si cadaalad ah la mid ah bogga waxyaabaha la midka ah. Waxay ku saabsan tahay CAD Forum, oo ay dhiirrigeliso CADStudio, oo leh faa'iido darro yar oo ku saabsan macnaheena maxaa yeelay taraafikada isku dhafan ee Ingiriisiga iyo Czech ayaa ka dhigaysa waxyaabaha ku habboon saaxiibbada ku hadasha Isbaanishka. Waxaan isku dayay inaan soo qiyaaso waxa ku jira waxa ku jira in kastoo ujeeddooyinka barashada ay wax yar ka yar tahay inta fiidiyowyada la arki karo.
Inta badan waxa la arki karaa iyada oo aan la soo galin, laakiin forumka iyo fiidiyowyada qaarkood waxay u baahan yihiin in la diiwaangeliyo, arrin qaadata daqiiqad kaliya; kuwa ku jira qaabka Flash waxaa lagu arki karaa internetka, kuwa kale ee qaabka avi waa in la soo dejiyaa.
Fiidiyeyaasha loogu talagalay injineernimada iyadoo la adeegsanayo AutoDesk Civil 3D
Nuxurka aasaasida dusha sare
Qaabka dhulalka, qalabyo kala duwan
Muuqaalka xawaaraha 3D ee dhibcood
Isbeddelka isbedbeddelka ah ee astaamaha dheeriga ah
Heerarka loogu talagalay naqshad jidka
Curricadaha toosan ee muuqaalka profile
Templates for warshadda profile
Hagaha ka soo horjeeda
Maqnaanshaha wejiga iyo buuxinta goobaha
Qaybaha iyo dusha sare ee dusha sare
Degmooyinka, faahfaahinta iyo qayb ka mid ah sawirada
Naqshadaynta qashinka, dhuumaha
Dhuumaha, is-beddelka isku dhaca
Dhuumaha, wax kale ...
Mawduuca dusha sare ku yaal, oo laga soo qaatay buug qoraalka
Soo saar sawir dhuleed Google Earth
Plex.Earth ka shaqeynaya AutoCAD 3D
Ku dhajinta dhibcaha 2D ilaa 3D adoo isticmaalaya TXT2ZC
Isticmaalka sheybaarada ... HTU
HEC-RAS, qaabaynta socodka biyaha
La shaqeynta macluumaadka laga keeno HEC-RAS
IInjineerada gaadiidka ee Dynamite VSP
Tirada baabuurta ee 2.0
Fiidiyeyaasha loogu talagalay Map-ka AutoCAD
AutoCAD Map 2009, oo ku shaqeyneysa laymanka WMS
AutoCAD Map, oo la shaqeysa xogta WFS
Iibsiga iyo qaababka leh faylasha SHP
Abuurista bukaanka sare ee node iyo xuduudaha
Dib u soo kabasho degdeg ah ee faylasha qaabka FDO
Abaabulka iyo isticmaalka nuqulada daabacan ee la isticmaalayo Topobase
Topobase - daabacaada dusha sare / macaamiisha
Topobase - xog raadinta oo isticmaalaya / macaamiisha webka
Topobase - dib u eegis iyo daabacaad / macaamiisha webka
Intaa waxaa dheer, waxaa jira qadar fiidiyowyo ah oo isticmaalaya AutoCAD, Inventor y Dib u noqo.
U tag Qalabka CAD
Isku qor halbeegyada CAD
Tag machad CAD ah
Post Previous" Hore 5 daqiiqo oo aamin ah barta Matías Neiff
Post Next KloiGoogle, xirmaan Google barnaamijka GIS aadNext »
2 Jawaabo "Fiidiyowyo dheeri ah oo loogu talagalay 3D madani ah, Khariidadda AutoCAD iyo Revit"
Cochita isagu wuxuu leeyahay:
Bogga ugu fiican, mahadsanid aad u badan
Bogga fiican, hambalyo. Ku dhaji posted in aan dhakhso u heli doono